Bogga ugu weyn 17 Shaqaalaysiiyaha Ugu Mushaarka Badan USA | Shirkadaha Ugu Fiican Iyo Gobolka
Isha sawirka: www.abetterinterview.com
Shaqaaleeyayaashu waxay leeyihiin ikhtiyaarro badan, labadaba shirkadaha dhexdooda iyo adeegyada shaqaalaysiinta. Faa'iidooyinka shaqo -qoristu waxay u dhexeeyaan faa'iidooyin dhab ah, oo la qiyaasi karo ilaa qanacsanaanta gudaha ee aad ka hesho caawinta dadka kale, haddii ay yihiin codsadeyaal ama shaqaale.
Waxaad awood u leedahay inaad qaabeyso xirfaddaada shaqaaleysiineed. Waxaa laga yaabaa inaad xirfaddaada ka bilowdo waaxda Kheyraadka Aadanaha oo aad ka shaqeyso sidii aad u qaadan lahayd qandaraas qore, aakhirkana samee aasaaska shirkadda qorista iyo meelaynta. Farxadda kasbashada aan xadka lahaynna waa mid maanka ku haysa.
Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu diiradda saari doonaa shaqaalaha ugu mushaharka badan.
Shaqaalaysiintu ma tahay doorasho xirfadeed oo wanaagsan?
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay wax ama laba ku saabsan shaqaalaysiinta sidii xirfad nololeed oo dhan waxaadna ku luntay fikradaha iyo fikirka go'aan qaadashadu haddii ay tahay xulasho xirfadeed oo wanaagsan iyo in kale.
Shaqaalaysiinta ayaa si cajiib ah u ah doorasho xirfadeed oo wanaagsan oo leh fursado aan xad lahayn. Waxaan u leenahay tan maxaa yeelay si ka duwan xirfadaha badankood oo shahaado ay shardi u tahay, lahaanshaha shahaadada shaqaaleysiintu waa faa iido maadaama aysan jirin shuruud gaar ah oo looga baahan yahay.
Xamaasad iyo dadaal, waxaad si fudud ugu fuuli kartaa jaranjarada adduunka shirkadaha.
Shaqaaleeyayaashu lacag badan ma sameeyaan?
Si su’aashan si habboon looga jawaabo, waxaa muhiim ah in la kala saaro labada nooc ee qorayaasha.
Waxaa jira shaqaaleysiiyayaal gudaha ah iyo shaqaaleeyayaal dibadeed.
Qorayaasha gudaha waa shaqaale shirkado. Waxaa lagu meeleeyaa miisaanka mushaharka sida shaqaalaha kaleba. Shaqaalaynta dibadda waa xirfadleyaal gaar loo leeyahay oo leh shirkado shaqaalaysi oo iyaga u gaar ah. Kuwani xad uma laha waxa ay kasban karaan maadaama ay lacag ka helaan inta heshiisyo ee ay awoodaan inay xidhaan.
Sidaas, Haa! Dadka wax qora ayaa lacag badan sameeya.
Intee in le'eg ayay shaqaaleeyayaashu sameeyaan?
Markaan ogaano inay jiraan, shaqaaleysiiyayaal gudaha ah iyo shaqaaleeyayaal dibadeed, waxaa markaas suurtogal ah in la sheego inta shaqaaleysiiyayaal gudaha ah.
Magdhowgu waa qaabka ugu qancin kara shaqaalaysiinta. Marka laga reebo qancinta dhabta ah ee caawinta shakhsiyaadka hagaajinta noloshooda, waa xirfad runtii abaal -marin leh.
Lacag badan oo aad shaqaysato, ayaa guushaada aad ku gaadhaysaa shaqadaada.
Celceliska dakhliga qaranka ee shaqo qorayaasha gudaha waa $45,360, sida uu qabo Glassdoor. Dhanka kale, ma jirto wax xaddidan inta shaqaale dibadda ah uu sameyn karo.
Read Yey Yihiin Kuwa Mushaharka Ugu Badan Bixiya 2022? | Ciyaaraha Ugu Fiican
Maxay yihiin shirkadaha ugu sarreeya shaqaaleysiinta Mareykanka?
Shirkadaha hoose ayaa ah kuwa ugu fiican ee shaqaaleysiiya gudaha Mareykanka marka loo eego darajada Forbes.
3. Korn Ferry
5. Xoog shaqaale
6. Kooxda Lucas
7. Ciidanka Xooga
#1. Robert Half
Robert Half waa shirkad shaqaaleynta oo la aasaasay 1948 xarunteeduna tahay Menlo Park, calories, United States.
Waxay leedahay in ka badan 16,000 oo shaqaale ah in ka badan 400 oo goobood waana mid ka mid ah qorayaasha ugu mushaharka badan Maraykanka.
Qaab dhismeedka qiimaynta Robert Half waa mid aad u adag in hoos loo dhigo sababtoo ah way kala duwan tahay iyadoo ku xidhan nooca booska aad buuxinayso iyo wakhtiga aad u baahan tahay shaqaalaha.
Waa inaad filaysaa inaad bixiso ku dhawaad ​​175 boqolkiiba waxa aad siin lahayd shaqaale haddii aad keligaa kiraysatay oo aad geliso liiskaaga mushaharka shaqaaleysiinta ku meel gaadhka ah.
Kharashkan waxaa ku jira mushaharka shaqaalaha iyo ku -meelgaarka, iyo sidoo kale khidmadda ay hay'addu qaaddo.
Warshado kala duwan, ururku wuxuu siiyaa shaqaale iyo adeegyo la -talin oo khaas ah.
Kelly waa Warshadaha qorista oo La Aasaasay 1946. Waxay ku taalaa Troy, Michigan, Maraykanka oo leh in ka badan 1,000 Shaqaale.
Celcelis ahaan mushaharka Kelly Recruiter waa $48,764 sanadkii. Mushaharka shaqo ee Kelly ayaa u dhexeeya $33,281 ilaa $98,414 sanadkii.
Marka loo eego darajada Forbes, waa mid ka mid ah shirkadaha qorista ee ugu mushaarka badan Mareykanka.
#3. Korn Ferry
Korn Ferry (NYSE: KFY) waa Los Angeles, California oo fadhigeedu yahay maareynta caalamiga ah iyo la-talin urur. Waxaa la abuuray 1969 -kii, laga bilaabo sanadka 2019, waxay shaqaaleysiisay 8,198 qof 111 xafiis oo ku kala yaal 53 dal.
La -tashiga, Dijital, Raadinta Fulinta, iyo RPO iyo Raadinta Xirfadeed waa afarta qaybood ee ganacsi ee Korn Ferry.
Qiyaasta celceliska mushaharka sanadlaha ah ee Korn Ferry, oo ay ku jiraan saldhigga iyo gunnada, waa $ 114,215, ama $ 54 saacaddii, halka magdhawga dhexdhexaadka ah lagu qiyaasay $ 107,616, ama $ 51 saacaddii.
Tani waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah qorayaasha ugu mushaharka badan Maraykanka
Aerotek waa shirkad qorista oo la aasaasay 1983. Waxay ku taal Hanover, Maryland, USA.
Aerotek waa shirkad shaqaaleysiisa iyo shaqaaleysiiyaal wadamo badan. Waxay shaqaaleeyaan ku dhawaad ​​19,000 oo qof waxayna la shaqeeyaan boqolaal meheradood. Waxay ka mid yihiin kuwa ugu mushaharka badan Maraykanka.
Aerotek waxay ku dallacdaa boqolkiiba dakhliga shaqaalaha ay ka helaan lacag ahaan. Kharashkani wuxuu ka koobnaan karaa 25% ilaa 100% dakhliga sanadlaha ee shaqaale kasta.
Macaamiisha Aerotek ayaa bixiya xiriiriyahan marka lagu daro mushaharka ay siiyaan shaqaalaha ay shaqaaleeyaan.
Qorayaasha waxay kasbadaan inta u dhexeysa $ 39k - $ 68k Iyo Celcelis $ 51,025 sanadkii.
ManpowerGroup, Inc. wuxuu ku jiraa xalka xoogga shaqaalaha iyo ganacsiga adeegyada.
Ameerika, Koonfurta Yurub, Waqooyiga Yurub, Aasiya Pacific Dhexe, iyo Maareynta Xaqa ayaa ah qaybaha shirkadda.
Iyada oo loo marayo xafiisyada laanta iyo franchise -ka, qeybta Ameerika waxay bixisaa adeegyo ay ka mid yihiin Manpower, Experis, iyo ManpowerGroup Solutions.
Qaybta Koonfurta Yurub waxay bixisaa qorista, qiimaynta iyo xulashada, tababarka, iyo adeegyada dibedda ee jagooyinka joogtada ah, ku meelgaarka ah, iyo qandaraaska.
Gudaha Boqortooyada Midowday, Waqooyiga Yurub, Jarmalka, iyo Nederland, Xoogagga Shaqaalaha, Khibradaha, iyo Xallinta ManpowerGroup waxay bixiyaan xalal iyo adeegyo kala duwan oo xoog leh.
Japan, Australia, Kuuriya, Shiinaha, iyo Hindiya ayaa dhammaantood qayb ka ah qaybta Aasiya Pacific ee Bariga Dhexe.
Qeybta Maareynta Xuquuqda waxay siisaa xalka xoogga shaqaalaha ee tayada iyo maareynta xirfadda. Elmer Winter iyo Aaron Scheinfeld waxay aasaaseen shirkadda 1948, waxayna ku salaysan tahay Milwaukee, Wisconsin.
Hadda waxay shaqaaleysiisaa in ka badan 27,000 oo shaqaale ah. Waa mid ka mid ah shaqaalaystayaasha ugu mushaharka badan Maraykanka.
#6 Kooxda Lucas
Kooxda Lucas waa hay'ad raadin fulineed oo ka caawisa bartamihii ilaa shirkadaha Fortune 500 inay ogaadaan shaqaale aqoon leh.
Waxay ka bilaabatay ganacsi dhexdhexaad ah Atlanta, Georgia 1970 iyada oo ujeedadu ahayd in laga caawiyo xubnaha millatariga u wareejinta nolosha rayidka ka dib markii ay si sharaf leh ugu adeegeen millatariga.
Kooxda Lucas ayaa koray si ay u noqoto wakaaladda shaqaalaynta ee Waqooyiga Ameerika iyo mid ka mid ah shirkadaha ugu mushaharka badan Maraykanka.
Mushaharka Qorayaasha Fulinta - 32 mushahar ayaa soo sheegay celcelis ahaan $ 47,525 sanadkii.
Kforce waa urur shaqaale iyo xalal xirfad leh oo bixiya isbahaysiyo istiraatiiji ah oo ku saabsan aagagga farsamada iyo maaliyadda iyo xisaabaadka.
Waa urur shaqaale iyo xalal xirfad leh oo bixiya isbahaysiyo istiraatiiji ah oo ku saabsan aagagga farsamada iyo maaliyadda iyo xisaabaadka.
Kforce waxaa la aasaasay 1962 oo xaruntiisu tahay Tampa, Florida.
Heerka mushaharka waa $ 36,000 - $ 59,000 Iyada oo celcelis ahaan ah $ 46,596 sanadkii.
Dawladaha Ugu Mushaharka Badan Mushaharka
Halkan waxaa ah sawir deg -deg ah oo tobanka gobol ee ugu sarreeya mushaharka:
Texas waa gobol ku yaal gobolka Koonfur-dhexe ee Mareykanka. Waa gobolka labaad ee ugu weyn Maraykanka marka loo eego deegaan iyo dad ahaanba.
Texas waa soosaaraha ugu horreeya saliidda, lo'da, idaha, macdanta, suufka, iyo dhogorta ee Maraykanka. Teksas ayaa kaliya ku xigta cabbirka Alaska marka loo eego aagga.
Austin waxaa loo yaqaanaa caasimadaha muusigga nool ee adduunka. Houston, Dallas, iyo San Antonio waa saddex ka mid ah tobanka magaalo ee ugu dadka badan Maraykanka.
Shaqaalaysiinta Texas waxay kasbadaan inta u dhaxaysa $50,238 ilaa $69,307 sanadkii taasoo ka dhigaysa gobolka Maraykanka kuwa ugu mushaharka badan.
Virginia, oo ah gobolka koonfur -bari ee Mareykanka oo leh xeeb dheer oo Atlantic ah, waxay ka socotaa Chesapeake Bay ilaa Buuraha Appalachian.
Waxay caan ku tahay beerashada tubaakada iyo lawska. Virginia waxay leedahay kaliya 4.3% heerka shaqo la'aanta.
Shaqaalaysiisku waxay helaan celcelis ahaan $82,676 mushaharka sannadkii iyo $1,589 todobaadkii. Waxay leedahay mid ka mid ah shaqaalaysiinta mushaharka ugu badan.
Michigan waa gobol ku yaal Badhtamaha -galbeed ee Mareykanka, oo ku yaal gobolka Harooyinka Weyn. Gobolka ayaa helay 89,900 shaqooyin sanadkii la soo dhaafay.
Warshadaha sida xawliga ah u koraya waxay ahaayeen adeegyo xirfadeed iyo ganacsi. Guusha dhaqaale ayaa laga dareemay Michigan oo dhan, gaar ahaan gobollada galbeed ee gobolka, halkaas oo dhaqaaluhu aad uga duwan yahay.
Celceliska mushaharka Michigan ee shaqaale qorista waa $68,187 sanadkii Michigan, 40% ayaa ka sarreeya celceliska qaranka. Shaqaalaysiinta halkan waa qaar ka mid ah qorayaasha mushaharka ugu badan ee Maraykanka.
#4. Waqooyiga Carolina
North Carolina waa gobol ku yaal gobolka koonfur -bari ee Mareykanka. Waa gobolka 28aad ee ugu weyn uguna dadka badan Mareykanka.
Waqooyiga Carolina, celceliska mushaharka Shaqaalaynta waa $ 55,487, in kasta oo kaladuwanaantu inta badan u dhexeyso $ 48,807 iyo $ 61,687.
Idaho waa gobol buuraley ah oo ku yaal waqooyi-galbeed ee Mareykanka oo leh dhul-mafis ballaaran iyo goobo madadaalo oo bannaanka ah.
Qaybta sayniska iyo tignoolajiyada hadda waa warshadaha Idaho ugu weyn. Waxa ay soo saartaa in ka badan rubuc ka mid ah dakhliga gobolka waxayna ka dhigan tahay in ka badan 70% dhoofinta gobolka.
Dhaqaalaha warshadaha ee Idaho ayaa sii ballaaranaya, iyada oo ay hormuud ka yihiin alaab tiknoolajiyad sare leh. Idaho waxaa lagu yaqaanaa baradhada, laakiin Gem State waa moniker rasmi ah.
Waxaa halkaas laga helay 72 dhagaxyo qaali ah oo qaali ah iyo kuwo qaali ah.
Celceliska mushaharka shaqaaleeyayaasha waa $56,210 sanadkii Idaho, waa 16% ka sarreeya celceliska qaranka taasoo ka dhigaysa hal gobol oo leh shaqaaleysiinta ugu mushaarka badan.
Celceliska mushaharka shaqaaleysiiyaha waa $ 56,210 sanadkii Idaho taas oo 16% ka sareysa celceliska qaranka.
Missouri waa gobol ku yaal aagga Galbeedka Mareykanka. Waa gobolka 19aad ee ugu dadka badan, oo ay ku nool yihiin ilaa lix milyan oo muwaadiniin ah.
St. Louis, Kansas City, Springfield, iyo Columbia waa magaalooyinka waaweyn, halka Jefferson City ay tahay caasimadda. Gobolku waa kan 21aad ee ugu weyn baaxad ahaan. Dawladdu waxay leedahay waax dhaqaale oo kobcaysa taas oo suuq fiican u ah shaqaalaysiinta.
Missouri dhexdeeda, celceliska magdhawga sanadlaha ee shaqaaleeyaha waa $ 43,628 taas oo 10% ka yar celceliska qaranka.
Gobol kale oo leh shaqaaleysiinta ugu mushaharka badan waa Pennsylvania, oo si rasmi ah Commonwealth of Pennsylvania.
Waa gobol ku yaal Mareykanka oo ku yaal Bartamaha-Atlantic, Waqooyi-bari, iyo gobollada Appalachian.
Heerka kobaca dhaqaalaha ee Pennsylvania 5tii sano ee la soo dhaafay wuxuu ahaa mid la yaab leh, sidaas darteedna wuxuu ka dhigayaa suuq weyn kuwa qorta.
Pennsylvania gudaheeda, celceliska magdhawga shaqaaleysiiyaha waa $ 65,982 sanadkii, taas oo 36% ka sareysa celceliska qaranka.
Joorjiya waa hal gobol oo Mareykanka ku yaal oo leh shaqaaleysiinta ugu mushaarka badan. Waa gobol koonfur bari ee maraykanka ah oo leh muuqaalo kala duwan oo ay ku jiraan xeebaha xeebaha, beeraha, iyo buuro.
Georgia waa Gobolka Peach, laakiin waxay kaloo soo saartaa digirta ugu badan, lawska, iyo basasha Vidalia ee dalka.
Georgia gudaheeda, celceliska magdhawga sanadlaha ee shaqaaleeyaha waa $ 44,958. 8% ka yar celceliska qaranka.
Utah waa gobol ku yaala galbeedka Maraykanka ee buurta galbeed hoosteeda. Colorado waxay xuduud ka leedahay bari, waqooyi-bari Wyoming, waqooyiga Idaho, dhanka koonfureed by Arizona, iyo galbeedka by Nevada.
Dhaqaalaha Utah waa kala duwan yahay, oo leh dalxiis, macdan qodis, beeraha, wax -soo -saarka, farsamada macluumaadka, maaliyadda, iyo soosaarka batroolka oo ka mid ah warshadaha waaweyn.
Celceliska mushaharka shaqaaleeyayaasha waa $57,431 sanadkii gudaha Utah taas oo 18% ka sareysa celceliska qaranka. Waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah shaqaalaystayaasha ugu mushaharka badan Maraykanka gudaha Utah.
Akhri: Waa Maxay Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan Adduunka? | 10 Ugu Fiican 2022
Colorado, oo ah gobol ku yaal galbeedka Mareykanka, waxay leedahay muuqaal kala duwan oo lamadegaanka oomane ah, dooxooyinka webiga, iyo Buuraha Rocky ee barafku daboolay.
Asal ahaan, waa gobolka siddeedaad ee ugu weyn iyo 21-aad ee ugu dadka badan Mareykanka, oo leh dhul kala duwan oo lamadegaan oomane ah, dooxooyinka webiga, iyo Buuraha Dhagaxa ah ee barafku daboolay.
Marka loo eego liiska CNBC ee "Gobolada ugu sarreeya Ganacsiga 2010," Colorado waa gobolka saddexaad ee ugu fiican Maraykanka. Celceliska mushaharka shaqaaleeyayaasha Colorado waa $57,535 sanadkii.
Su'aalaha la isweydiiyo ee qorayaasha ugu mushaarka badan
Waa kuma shaqaaleeye?
Inta lagu jiro habka shaqaalaysiinta, shaqaaleeyaha wuxuu ogaadaa musharrixiinta u qalma fursad shaqo wuxuuna ka shaqeeyaa inuu daboolo baahiyaha loo -shaqeeyaha iyo shaqaalaha labadaba.
Sideen ku noqdaa shaqaale qora?
6 Tallaabo oo aad ku Noqon karto Shaqaale
Qaado shahaado Looma baahna in la haysto shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Khibrad u yeelo qorista.
Hel khibrad shaqo oo lagama maarmaan ah.
Ka qayb qaado qorista iyo tababarka.
Codso furitaanka furan ee qorista.
Ma u baahanahay ruqsad si aan u noqdo shaqaale?
Ma jiraan shati dawladeed oo looga baahan yahay inuu ku shaqeeyo shaqaaleeye madax-bannaan ilaa hadda. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo mas'uul ka ah qorista shaqaale cusub ayaa leh caqabado sharci oo isku mid ah.
Sidee bay shaqaaleeyayaashu lacag u helaan?
Shirkadda shaqaalaynta ayaa lacag siisa qofka soo qora si uu ugu xiro musharrax ku habboon.
Waa maxay "e-recruitment?"
E-qorista, oo inta badan loo yaqaan qoritaanka khadka tooska ah, ayaa soo jiidata, helista, qiimaynta, iyo shaqaaleysiinta dadka iyada oo la adeegsanayo internetka, software, iyo tignoolajiyada kale.
Shaqaalaysiiye miyaanay ahayn wax la yaab leh? Fikradda fursadaha aan dhammaadka lahayn ee kobaca shaqada, dhammaystirka caawinta dadka kale inay gaadhaan riyooyinkooda, iyo raaxada jeegga cayilan waa inay kugu filan tahay inay kugu dhiirigeliso inaad shaqo qorto ah qaadato.
Dib u eegista Buugga Farxadda: Farxadda waarta ee Isbeddelka
Ma xiisaynaysaa inaad ogaato shaqaalaha duulimaadyada ee aduunka ugu mushaarka badan? Ka bacdi fiiri maqaalkan xog-warran...
20 Kaararka Amaahda Ugu Fiican ee Dadka Waaweyn 2021
Ma leedahay sumcad fiican? Hel talooyinkayaga kor u qaadista kaarkaaga abaalmarinta ama helitaanka is-qoritaanka kaash…
15 Barnaamijyada Shukaansiga Gayga ee ugu Fiican 2022 | Dib u Eegid Buuxda
Dhowr sano ka hor, sharciyo badan oo xaddiday xiriirka khaniisiinta ayaa jiray. Wax badan oo…
20ka Goobood ee TV-ga Tooska ah ugu Fiican 2022
Waxaa jira dhowr goobood oo aad ka daawan karto TV-ga tooska ah ee bilaashka ah. Nasiib darrose, maamulka internetka ayaa xakameynaya…
15 Software -ka Wada -sheekaysiga Fiidiyowga Bilaashka ah ee Goob -hawleedka 2022
Wadahadalka fool-ka-ka-foolka ah hadda ma ahan wax caadi ah sababtoo ah saameynta xun ee aafada. Si kastaba ha noqotee, dadku waxay u baahan yihiin inay…
Daqiiqad 17 akhri
Bilaabidda iyo kasbashada madal madax -bannaan waxay la mid tahay aasaasidda shirkad. Waa inaad marka hore horumarisaa khibrad…